China Electric Kettle XT-9S fanamboarana sy orinasa | AOLGA
Kitiho ny tahony mba hialana / vonoy
Apetraho eo am-potony ny kettle feno rano, tsindrio moramora ny tahony handrahoana rano, tsy mila hetsika fanampiny ilaina.
• Kitiho ny tahony mba hialana / vonoy
• Fahaiza-manao mety
600ML, ny fahaiza-manao ambony indrindra amin'ny tavoahangy rano mineraly dia misoroka ny fako.
• Somary & Haingana
Kitiho ny tahony, fakana 180s fotsiny mba hosotroina tsara ho an'ny fisotroanao.
Ny fanambanin'ny kettle vita amin'ny tombo-kase sy mamoaka feo dia mangotraka mangotraka mandritra ny dingana rehetra.
• Tsy misy fihoarana
Azo amboarina amin'ny rano sy dite, ary tsy misy fiakaran'ny rano mba ho maina foana ny birao.
• Fampitandremana momba ny buzzer
• Vantany vao vita ny mangotraka dia manomboka ny fampitandremana buzzer hahazoana antoka fa azo antoka sy manana traikefa amin'ny mpampiasa lehibe.
• Misy amin'ny toerana rehetra misy teboka hafa
• Ny teboka mangotraka samy hafa, na amin'ny faritra avo na amin'ny lembalemba dia manome fampiharana maharitra sy azo atao amin'ny tontolo samihafa.
• V0 flameresistant fitaovana
Ny fitaovana tsy metaly eo amin'ny fotony eo amin'ny haavon'ny V0 dia azo antoka sy sariaka amin'ny tontolo iainana.
• Famonoana hafanana avo
Ny voalohany manana 280 ℃ hafanana avo amin'ny rindrina ivelany, miaraka amin'ny fanoherana tsara sy fanoherana fitafiana dia mitondra fiarovana tsara kokoa sy androm-piainana.
• Aluminium madio amin'ny tanany
Ny concave millimeter-tonga lafatra dia natao ho an'ny fikirakirana tsara indrindra.
• SUS304 amin'ny vatana
Ny fitaovana SUS304 avo roa heny amin'ny vatana dia avy amin'ny POSCO Koreana Tatsimo.
• Mitantana mitovy amin'ny switch
Drafitra kanto hiova mora foana amin'ny fitsapana ny asan'ny andro mitohy 100 no lany.
• Controller ny mari-pana UK STRIX
Izy io dia mateza sy malaza manerantany amin'ny sehatra.
• Fototra miaraka amina lanja manokana
200G fanampiny no nanampy ho an'ny tsy milamina. Tsy misy rano miangona amin'ny faritra malama, raha tsy voaporofo kosa ny vodin-tany.
Sakafo vy stainless SUS304 sakafo
Vatan'ny vilany misy sosona roa, tantanana mitovy amin'ny switch, UK STRIX mari-pana mari-pana, fampitandremana Buzzer
Teo aloha: Kettle elektrika LL-8860/8865
Manaraka: Fanamainana volo RM-DF11
304 vilany vy tsy misy herinaratra
Kettle elektrika manohitra fanamainana
Ketera elektrika fiarovana may
Kettle elektrika 0.6 litatra
Kettle elektrika miaraka amina fametahana
Kitapo elektrika mandeha lavitra
Kettle rano kely herinaratra